Anund Farm na Vike ịgba mwe mwe ọsọ track | Holmbygden.se
Anund Ugbo ịgba mwe mwe ọsọ track
N'ihi na ndị na-achọ ime a-enye ume ọhụrụ ski ma ọ bụ a mara mma n'oge okpomọkụ ije abụọ ụzọ ụkwụ na-emeghe n'afọ. A mkpumkpu ubé undulating na ìhè tracks i Anundgård na 2,5km. Tụkwasị na nke ahụ bụ ihe ọzọ ọzọ track na 8km (t.o.r.) si Anundgård ka Österström, nke jikọọ mkpumkpu. Adabara saịtị maka mmalite / imecha na ezi na-adọba ụgbọala ụlọ ọrụ na-Holm Vallen, Anund Manor School na Österströms Estate. N'oge oyi, na egwu na-na-mgbe niile na mma mgbe snow cover na-enye ohere. Iji nri ị ga-ahụ ugbu a na track ọnọdụ. Electric ọkụ bụ na-akpaghị aka na mụ na ruo mgbe elekere 22:00.
Kpọtụrụ maka ozi:
. ọhụrụ akụkọ
Holm Wallen ụzọ ụkwụ Map
(n'ihi na ibu size – pịa ebe a)
More ọmụma na map, wdg. nwere ike na skidspår.se:
Skidspår.se / Västernorrland / Sundsvall / Stockholm mkpọda
Vike ịgba mwe mwe ọsọ track
Ọbụna Vike bụ a 2,5 kilomita nke ụzọ ụkwụ mara maka ya kwa afọ stafettävlingar. The track na-illuminated na mmalite na imecha na Vike akwụkwọ. Ị nwekwara ike ịhọrọ a mkpumkpu loop 1 km. The track na-usoro Vike Voluntary compound.
Mgbanye ọkụ a na-eme iji aka na akara n'okpuru oriọna na-eme achịcha, -ahụ ihe ịrịba ama na ntụpọ. The ọkụ ga-agbanyụ na akpaghị aka 21:30.
More ọmụma na map, wdg. nwere ike na skidspår.se: Skidspår.se / Västernorrland / Sundsvall / Vike
Gịnị ga-eme ski ọnọdụ?
Zuru ezu obodo amụma ihu igwe maka Holm na-abịa n'ụbọchị a ga-ahụ na ị na na weather.
Back to Tourism / Ntụrụndụ